Ku rakibidda Microstation XM - Geofumadas
Abriil, 2008 Microstation-Bentley
Aniga waan ka hadlay dhowr maalmood ka hor in aan helay album ah Microstation XM, oo ay ku jiraan Bentley Map iyo Bentley Cadastre; laakiin ujeedada cusbooneysii nolosha ee mishiinkeyga ayaan waqtigaan uqaaday markii aan ka soo laabtay safarkayga.
Dareenka ugu horreeya waa waxoogaa qariib ah, waayo, dadka isticmaala qoraaladii hore, waxaan ognahay inayan waxba ka qaadin wax kale. Sababtoo ah hadda waa horumar ku jirta .NET, waxaa jira shuruudo, taas oo markaad codsato CD-ga Doorto gudaha. (haddii aanad imaanin, la hadal gabadh qurux badan Bentley Spain la yiraahdo Blanca oo waxay ka heli doontaa hab lagu meeleeyo FTP)
Ma aha in tani ay noqoto nidaam ama ugu yaraan waa inay noqotaa macluumaad dheeri ah online, San Google ayaa kuu diraya inaad horey u dhigto dhirta kale ee XM.
Tusaale ahaan Dooro Server XM waxay ubaahantahay
MSXML 4.0 SP2 ama ka sareeya
Adeegyada Macluumaadka Internet-ka ee IIS (oo leh taageerada ASP.NET)
Iyo malaha ugu horeysa ee naga mid ah dadka ayaa ah in isku mid loo isticmaalo Microstation XM ... sidoo kale maya.
Waa maxay shuruudaha Microstation XM
Waxay yihiin sifooyinka jawiga horumarinta iyo maktabadaha lagama maarmaanka u ah rakibidda shaqada. ESRI iyo AutoDesk waxay ugu yeeraan "Service Pack", sababtoo ah Bentley wuxuu sii wadi doonaa caadadiisa oo u eg sida qofna uusan ugu yeerin inuu u baahnaado ... ok!
Waa maxay shuruudaha
Taasi waa meesha baqshi uu ku sameeyay qaabka Hugo Sánchez ee Genaro ... sababtoo ah ma aanan helin meesha ay ku soo dejisan karto, inkasta oo aan hubo in ay jirto goob aan ku dhejin Google. Taasi waa sababta ay u yimaadaan diskka, ama waxay ku jiraan meesha laga soo xareeyo; Xaaladdan, waxaan ku rakibayaa version 08.09.04.51.
Tani waxay ku jirtaa cusboonaysiinta:
Microsoft .NET Qaabdhismeedka 2.0
Qalabka Microsoft .NET 2.0 64
Nuqulka Qoraalka Qoraalka ee Microsoft .NET
Xaqiijiye XML Xaqiijiye (MSXML) 4.20
Microsoft Visual Basic ee Codsiyada Muhiimka ah
Muuqaalka Microsoft Visual Basic ee Codsiyada
Waxay u muuqataa mid aad u macquul ah, sababtoo ah nidaamku wuxuu ogaanayaa haddii ay jirto dhibaato la xidhiidha rakibidda maktabadda oo ay ku qasbaan inaan loo baahnayn
Tani waxay soo jeedineysaa in noocyada kala duwan ay ku jiraan faylasha kala duwan ee shuruudaha. Ugu dambeyntii waa inaan qirayaa in adeegga Bentley uu ka fiican yahay, ugu yaraan via Skype ... inkasta oo ay tahay inay sameeyaan waxa loo baahan yahay, xusuusnaashada in is-baridu aysan fileynin isticmaalka taageerada ... kaliya Google.
Dhibaatadan yar, rakibistu si fiican ayuu u shaqeeyaa. Hadda, waxaan rajeynayaa in aan ogaado inta badan waxa la sameeyay XFM ee NET, markay bilaabeen 2004 gebi ahaanba cayriin, waxay ku dhowdahay inay isku dhafan yihiin Cadaster. Waan isku dayi doonaa oo waxaan kuu sheegi doonaa.
Post Previous«Previous Maxaan hadda samaynayaa?
Post Next Halkee laga helaa buug-gacmeedka MicrostationNext »
3 jawaabta "Ku rakibidda Microstation XM"
Waad ku mahadsan tahay Tomas, anigu ma aan akhrin ... oo waxaan ku hayn doonaa maskaxda
Hello G!, Waxaan ka tagay su'aalo ku saabsan Microstation V8 iyo XM ee forum Cartesia. Waxaa laga yaabaa inaad ka hadli kartid:
Jimmy isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay nuqulkan microstation, waxaan haystaa xmka jopopf laakiin waxa ay i waydiisaneysaa inaan haysto ugu yaraan qaabka microse-ka ee aad haysato, waxaan u maleynayaa in aan sameyn karno isbeddel, boosteejahaygu waa jimyto2000@yahoo.es